China High ihie Open Vivid Omenala Acryli Ikanam Neon ịrịba ama -20LPS009 rụpụta na Factory | Meiyi
Akwa ihie Mepee Vivid Omenala Acryli LED Neon Sign -20LPS009
Nọmba nlereanya: MY0168 ihe: Ikanam pop ịrịba ama
size: 75x25CM, nwere ike ịhazi Agba bọlbụ: acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, odo, acha anụnụ anụnụ
Akwụkwọ ozi Neon
Akwụkwọ ozi Neon bụ otu n'ime ụdị akara ngosi mpụga kachasị ewu ewu taa. Ọ dị mfe ọgụgụ, doro anya
ma rụọ ọrụ nke ọma iji gosi ọnọdụ ahụ, ọ dịkwa mma na ndozi ụlọ na ndozi ụlọ ahịa.
* Ọ naghị adị mfe nkwarụ
* Ezigbo agba, mmetụta na-adọrọ anya.
* High okpomọkụ na-eguzogide, ọ dịghị mmetụta na mgbanwe ihu igwe
* Strong stereoscopic utịp mgbe ịkpụzi.
* Waterproof, Ọkara n'èzí
1. Ọ bụrụ na ị nwere a imewe draft, kpọtụrụ anyị, na-ezite ya ka anyị, na anyị ga-eme ndokwa mmepụta.
2. Ọ bụrụ na ịnweghị usoro ịmepụta, biko kpọtụrụ anyị, gwa anyị ụdị ị masịrị gị, gwa anyị ihe dị na ya, anyị na-eme ndokwa ndị ọkachamara ọkachamara ịhazi gị, ma dozie mmepụta gị mgbe ị nwetara afọ ojuju.
Unique Acrylic Board Neon Sign: Ihe ịrịba ama a na-acha anụnụ anụnụ nwere ike na-enwu gbaa ma gbanwee oghere gburugburu ya. Jiri ya iji kpoo ụlọ obibi, ịla azụ na kichin, mee ụlọ mmanya mara mma ma ọ bụ ụlọ egwuregwu egwuregwu. Ọnọdụ maka ịrapara na mgbidi, tinyekwuo mmadụ na ime ụlọ, ụlọ ọrụ ụlọ, ime ụlọ ịwụ, windo, tebụl, na mbara ihu.
Emelitere Nnukwu Neon Sign Light: 19 sentimita asatọ n'obosara x 5 sentimita asatọ, ocha LED tubing n'ịnyịnya iji kpochapụ ndabere plastic. Abụọ-gbapuru oghere maka mfe nghọta (nko nko adịghị gụnyere).
Mankeummanye na-enye ike .LED tubing na-emetụ n'ahụ ọbụna mgbe ọ dị - ngwaahịa anaghị ekpo ọkụ! Naanị tinye n'ime nkwụnye mgbidi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ USB iji gbanye! Mara: Agaghị etinye ihe nkwụnye ọkụ.
Eco-Materials for Safety: Kama nke na-emebi emebi iko neon ịrịba ama, nke a neon mgbidi ịrịba ama na-mere nke odachi-free mgbanwe neon tube na mgbochi-ada ada plastic, whic na-anagide okpomọkụ na obere circuirty mma maka ogologo oge iji.
Wide Application: Ihe ngosi ọhụụ ọhụụ na-edochi oriọna desktọọpụ na-agwụ ike ịgbakwunye agba ọkụ na ime ụlọ kacha gbaa ọchịchịrị. A na-eji ya agbamakwụkwọ, oriri bachelorette, oriri agbamakwụkwọ, oge ịsa ahụ, mmemme brithday, oriri na ọ themụ andụ na mmemme ndị ọzọ.
Nke gara aga: Mgbanwe Mgbanwe Mgbasa Ozi Mgbasa Ọrụ Ọrụ LED Neon Sign -20LPS005
Osote: High Quality OEM Unbreakable Custom Brightness Customization Ikanam Neon ịrịba ama -20LPS004
Budweiser neon sign hazie-MY0168
N'ogbe Omenala Bar Electronic amụnye acrylic ...
Coca cola neon sign hazie-MYI010
Multicolor mmanya ngosi 3D n'èzí mgbanwe acr ...
Coca cola ụzọ atọ neon akara aka-20LPS012